Video – Raveloson Constant – Magro 07 fev 2011 – MyDago.com aime Madagascar
Video – Raveloson Constant – Magro 07 fev 2011
Video Raveloson Constant Magro 11/01/2011
Video Raveloson Constant au Magro 24 janv 2011
Auteur Solo RazafyPublié le 7 février 2011 Catégories Magro, Malagasy, Politique, Vidéos
4 réflexions sur « Video – Raveloson Constant – Magro 07 fev 2011 »
8 février 2011 à 2 h 01 min
Misaotra anao Atoa Constant RAVELOSON!
Tena tsy FAtn’alika intsony iay Astérix fa dia FATn’olona tsy misy ilàna azy!.. Soa fa tsy mba misy anarana hoe RATSY RAHONANA izany ny anarako!
Ianareo taranany ve dia mbola sahy mijery fitaratra amin’izany teniny izany?… Efa tena dadabe marina lery ka tsy fantany intsony izay teneniny!.. Izaho aza mieritreritra hoe sao dia efa tokony ho alefa any amn’ny « auspices des aliénés » ary izy iny?… Teny atsipy fotsiny izany ho an’ireo havany sy namany e!….
8 février 2011 à 6 h 06 min
Tsarovana mandrakariva ato an-tsaina ny anaranareo sy i Manoela: mahery fo eto amin’ny firenena.
Mipoa-tsatroka anao Raveloson Constant a !
Iza, iza ny razan’io lehilahy lehibe tsy mifady fanonganam-panjakana monina eto Iarivo mitondra anarana Ratsirahonana io ? Aiza ny tanindrazany, iza ny anaran’ny vehivavy nivoahany ary iza ny lehilahy nanabe azy?
Farany : iza ireo miray rA na sy kolokoloina amin’ny fanonganam-panjakana eto? Avy aiza ilay mitondra solon’anarana « iarivo » tsy mifady fanitsakitsahana LalAna sy miloloha mpitsara corrompus?
Dia misaotra an’i Mr Constant foana ny tenanay amin’ny fahasahiany miteny Andriamanitra anie hobanao.
Ary mba nakaiza i Satrobory e!
Précédent Article précédent : Video – Manoela au Magro 07 fevrier 2011
Suivant Article suivant : Aoka izay ny sain-jaza ! Ampy izay ny andrakandrana !